Dhalinyara ka kala yimid qaar kamid ah degmooyinka gobalka Banaadir oo taba-bar loogu soo xiray Muqdisho-(sawirro). | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR Dhalinyara ka kala yimid qaar kamid ah degmooyinka gobalka Banaadir oo taba-bar...
Dhalinyara ka kala yimid qaar kamid ah degmooyinka gobalka Banaadir oo taba-bar loogu soo xiray Muqdisho-(sawirro).
Xog-hayaha Guud ee Maamulka Gobolka Banaadir Mudane Omar Abdirizak Hussein ayaa maanta soo xiray Tababar socday Mudo 3 bilood ah oo loo qatay qaar ka mid ah Dhaliyaradda Gobolka Banaadir , kuwas oo gaaraya 150 dhalinyaro ah.
Degnmooyinka Wadajir, DHarkenley, Kaxda, Deyniile iyo Heliwa ayay ka socdeyn dhalinyaradani waxaana Mudana 3da bilood ah lagu barayay Casharo kala duwan sida: 1-Community Work (Iskaa Wax U Qabso ), 2-Lifeskill ( Xirfdaha Nolosha), 3-Vocational Training (Farsamooyinka), 4-Business (Maareeynka Ganacsiga), 5-Computer (Xirfadaha Computerka ), 6-First Aid (Gargaarka Deg Degga Ah).
Barnaamijka shaqeeyso waa mashruuc loogu tala galay in kor loogu qaado aqoonta dhalinyarada soomaaliyeed dhinaca xirfadaha iyo farsamooyinka si ey u maareeyaan nololshooda waxaana taageeradiisa dhaqaale bixineysa Hey’adda UNHABITAT-Somalia iyadoo uu Maamulka Gobolka Benaadir uu bixinayo fududeeynta iyo farsamooyinka barnaamijkan.
Mashruucaan waxa uu soo maray heerar kala duwan oo kala ah wajiyada 1aad iyo 2aad oo horay usoo dhamaadeen bilowgii sanadka 2017-ka iyadoo Octobar 2017 uu bilowday barmaajika wajigiisi 3aad kaas oo maraayo heer gabagabo ah.
Mudane Omar Abdirazak Hussien ayaa kula dar-daarmay dhalinyarada dhameysatay taba-barkan in ay ku shaqeeyaan kuna anfacaan degmooyinkooda.
Previous article“Waxaa naga go’an in dadka magaalada Muqdisho ay soo doortaan hoggaankooda”. ENG Yariisow
Next articleWasiirka amniga oo warbixin ku saabsan caruur laga soo bad-baadiyay Al-shabaab ka jeediyay kulankii golaha wasiirada.